Taiwan: Sarin’ny Matsom-Pireharehana Maha-LGBT 2011 tao Taipei · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Novambra 2011 9:54 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, srpski, 日本語, English
Fangon'ny Taiwan LGBT Pride 2011
Maherin'ny 50.000 ireo olona namonjy ny hetsika Matsom-Pireharehana LGBT Taiwan fanao isan-taona tao Taipei tamin'ny 29 Oktobra 2011, manamarika ny filaharambe goavana indrindra ao Azia.
Nitolona nandritra ny taonjato maro ny fivondronan'ny LGBT Taiwaney mba hitaky ny fitovian-jo sy ny fanajana. Na dia efa mihena dia mihena aza ny fanoseha-bohontanana eo amin'ny fiainana andavanandro, mbola mivoitra eo amin'ny rafi-panabeazana sy ny lalàna ihany ny fanilikilihana. Hoy ny vohikala ofisialin'ny hetsika:
Zazalahy mitazona sora-baventy milaza fa tia vehivavy ny reniny nefa reny tonga lafatra izy
Raha oharina amin'ny filazana fankahalana “eo imaso imaso” nahazo ny LGBT folo taona lasa eo ho eo izay, dia efa mianatra miteny tahaka ny hoe “manaja ny LGBT izahay” ny anti-LGBT ary mihevi-tena ho liberaly. Mandritra izany fotoana izany dia tsy mitsahatra ny manakana ny nanova sy ireo mpitia mitovy fananahana (LGBT) hanana ny zo fototra maha-olona. Fanampin'izany dia efa miezaka ny handresy lahatra amin'ny fomba tsy mendrika ny mpanao lalàna sy ny mpanao politika ry zareo, izay mety hanimba ny fandavorariana ny fivoarana demokratika. Ao anatin'izany toe-draharaha sarotra izany dia mandrisika ireo nanova sy ireo mpitia mitovy fananahana hijery tsara izay mety ho fanavakavahana eo amin'ny kolontsaina sy eo amin'ny fiaraha-monina ny fikambanan'ny Rehareha maha-LGBT Taiwan, ary hiezaka ny hanaisotra hatrany ny fanilikilihana miafina mba hahamafy ny fototra fanajana ny zo maha-olona.
Notontosaina voalohany tamin'ny 2003 izay nahitana mpandray anjara 500 eo ho eo, nihanalaza vetivety ny hetsika ka nahitana mpandray anjara 25.000 tamin'ny 2009, ary 30.000 tamin'ny 2010. Tamin'ity taona ity moa dia montsana indray ny fahabetsahana indrindra.
Ny lohahevitra dia “Mitolona indray ny LGBT! miala ny fanavakavahana!”, Niainga teo amin'ny fihaonan-dalana Kaidagelan tao Taipei ny filaharambe dia nizara roa ka tafahaona indray teo amin'ny fihaonan-dalan'ny Kaidagelan. Mitaky ny hanajana ny safidim-pironana ara-pananahana sy ny safidin'ny tanora, ny fametrahana ny fanabeazana ara-pananahana, ny fampidirana ho ara-dalàna ny mariazin'ny mitovy fananahana, ary ny fanesorana tsy ho heloka ny asam-pananahana (fivarota-tena).
Ireto ambany ireto moa ny sasatsasany amin'ny sarin'ny matso tamin'ity taona ity nalaina tao amin'ny Coolloud.org.tw:
Misy ny mpitondra fivavahana manohitra ny filazalazana ny momba ny LGBT any an-tsekoly. A parade participant plays
Mpianatra maro avy ao amin ny Anjerimanontolo mandray anjara
Mpanohana kosa ny mpizahatany sy ny mpianatra vahiny mandrato fianarana any.
Mitantara ny nanjo azy tamin ny nataon ny mpampiasa azy taloha ny mpiteny noho ny fiakanjoany akanjom-behivavy
Fikambanan ny Mpiasa vahiny manandratra ny feon ny mpiasa vahiny vitsy an isa mitaky ny zony ara-pananahana
Milaza ny fanilikilihana roa sosona mahazo azy ny mpikambana LGBT sembana.
Mpihira malaza Deserts Chang no tamin ity taona ity
Mbola misy sary hafa azo jerena ihany koa ao amin'ny Rakitsary flickr Coolloud.org sy ny rakitsary ofisialin'ny vohikalan'ny matso.